Global Voices teny Malagasy » Hong Kong: Miaro ny fahalalaham-pitenenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Febroary 2009 8:22 GMT 1	 · Mpanoratra Winglok Hung Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Hong Kong (Shina), Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Politika
Mihoatra ny zato ny mpoina ao Hong Kong no nidina an-dalambe hanambara amin'ny hafa fa mihemotra ny fahalalaham-pitenenana any aminy tamin'ny 22 Febroary 09 lasa teo. Ny Citizens’ Radio no namolavola ny fihetsiketsehana ary notohanan'ny fikambanana mpiaro ny demaokrasia sahala amin'ny Save RTHK Campaign  (fanentanana hiarovana ny Radio Televiziona Hong Kong), Hong Kong Human Right Monitors  (na mpanentana momba ny zon'olombelona any Hong Kong) ary ny firaisan'antoko demaokratika any Hong Kong.
“Supporting Citizens’ Radio” (Fiarovana na fanohanana ny fampielezam-peon'olom-pirenena) sy “Supporting RTHK” (Fiarovana na fanohanana ny RTHK) moa no tarigetra miverimberin'ny mpanao fihetsiketsehana indrindra. Tsy faly tamin'ny fanivanana ireo nasaina hiresadresaka tao amin'ny Citizens’ Radio ny mpanao fihetsiketsehana ary tratran'izany Atoa Szeto Wah, 78 taona fantadaza ho manohana ny demaokrasia sady efa filoha teo aloha tao amin'ny fikambanana mpanohitra ny Kaominista, Firaisankinan'i Hong Kong manohana ny hetsika demaokratika any Shina . Mahatezitra ny mpitokona ihany koa ny fandavana ny fanovana ny RTHK miankina amin'ny fanjakana amin'ny ampahany betsaka nefa mpitsikera ny governemanta ho fampielezam-peo (sy sary) tsy miankina.
Mpandray anjara hafa XOX  vonona hiaro ny fahalalaham-pitenenana any Hong Kong:
Ho setrin'ny lahatsoratr'i Donald Tsang momba ny Fahotana Fito Mahafaty, dia nahita i pangtszyin  fa,
Misy adihevitra vitsivitsy moa ao amin'ny takela-baovaon'ny facebook  ary ny lahatsoratra etsy ambany kosa dia mampiseho rindran-kira notontosaina teo ivelan'ny biraon'ny fanjakana foibe taorian'ny fivoriana:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/25/1721/
 Citizens’ Radio : https://globalvoicesonline.org/2009/02/24/hong-kong-defending-freedom-of-speech/www.citizensradio.org
 Save RTHK Campaign: http://www.petitiononline.com/SaveRTHK/petition.html
 Firaisankinan'i Hong Kong manohana ny hetsika demaokratika any Shina: https://globalvoicesonline.org/2009/02/24/hong-kong-defending-freedom-of-speech/www.alliance.org.hk
 Angel Lee : http://leeccangel.blogspot.com/2009/02/20090222.html
 adihevitra vitsivitsy moa ao amin'ny takela-baovaon'ny facebook: http://www.facebook.com/home.php?#/event.php?eid=62082169201